Bit By Bit - Ikusasa - 7.2.3 Ethics in design ucwaningo
Ethics kuyoshukumisela kusuka ukukhathazeka neuropathy a ukukhathazeka central futhi ngenxa yalokho ngeke abe isihloko ucwaningo.
Esikhathini sobudijithali, ukuziphatha kuzoba yinkinga eqhubekayo yokwenza ucwaningo. Lokhu kungukuthi, esikhathini esizayo, sizozikhandla kancane ngalokho okungenziwa futhi okunye okufanele kwenziwe. Njengoba lokho kwenzeka, ngilindele ukuthi indlela esekelwe emthethweni yezosayensi bezenhlalakahle kanye ne-ad hoc indlela ososayensi bezombusazwe izophendukela kulokho okufana nemigomo esekelwe ekuchazwe kusahluko 6. Ngilindele nokuthi njengoba izimiso zokuziphatha ziba phakathi, kuzoba zikhule njengesihloko socwaningo lwezobuchwepheshe. Ngendlela efanayo abacwaningi bezenhlalo manje basebenzisa isikhathi namandla ukuze bathuthukise izindlela ezintsha ezivumela ukulinganisa okuphansi futhi okunembile, ngilindele ukuthi sizophinde sisebenze ukuthuthukisa izindlela ezithintekayo ngokweqile. Lolu shintsho luzokwenzeka hhayi nje ngoba abacwaningi bayakhathalela ukuziphatha njengokuphela, kodwa futhi ngoba banakekela ukuziphatha njengendlela yokuqhuba ucwaningo lomphakathi.
Isibonelo salokhu mkhuba (Dwork 2008) okuyimfihlo yokuhlukanisa (Dwork 2008) . Cabanga ukuthi, isibonelo, isibhedlela sinemininingwane ephelele yempilo futhi abacwaningi bafuna ukuqonda amaphethini kulezi zinsuku. Ukuhlelwa kwezinto ezihlukile zangasese kwenza abacwaningi bakwazi ukufunda ngamaphethini amaningi (isb., Abantu ababhema bangase babe nomdlavuza) ngenkathi kunciphisa ingozi yokufunda noma yini mayelana nezici zanoma yimuphi umuntu. Ukuthuthukiswa kwalezi zindlela zokulondolozwa kwangasese kube yindawo esebenzayo yokucwaninga; bheka i- Dwork and Roth (2014) yokwelapha ubude besikhathi. Ubumfihlo obuhlukile buyisibonelo somphakathi ocwaninga ukuthatha inselele yokuziphatha, ukuyibeka iphrojekthi yocwaningo, bese uqhubeka nokuthuthuka kuyo. Lena iphethini engicabanga ukuthi sizoyibona nakwezinye izindawo zokucwaninga kwezenhlalakahle.
Njengoba amandla abacwaningi, ngokuvamile ngokubambisana nezinkampani kanye nohulumeni, aqhubeka ekhula, kuzoba nzima ukugwema izinkinga eziyinkimbinkimbi zokuziphatha. Kulokhu okuhlangenwe nakho kwami ​​ukuthi ososayensi abaningi bezenhlalakahle kanye nososayensi bemininingwane babheka lezi zinkinga zokuziphatha njengemfudumalo okufanele igwenywe. Kodwa, ngicabanga ukuthi ukugwema kuzoba ngokungathinteki njengecebo. Njengomphakathi, singakwazi ukubhekana nalezi zinkinga uma sifinyelela futhi sizenzele ngobuciko nemizamo esiyisebenzisayo kwezinye izinkinga zokucwaninga.